Mugabe’s Full Politiburo Speech – Zimbabwe Daily
Mugabe’s Full Politiburo Speech
2 Comments	/ TOP STORIES / By Editor
(Last Updated on October 30, 2014 by Editor)
HARARE – PAMBERI nokubatana mu Zanu-PF!, neWomen’s League muZanu-PF! neYouth League mu Zanu-PF! pamberi neChimurenga! Nechimurenga! Nechimurenga! Pasi neMDC!
MaComrades ose, Cde (Patrick) Nyaruwata, maWar Veterans vese varipano, vanaamai (Shuvai) Mahofa madzimai ose ari pano, mayouths edu, ose aripano. Vose mawar collaborators, vana chimbwido ,ZIPEDRA vose vari pano, macomrades vose vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari pano vakamirira musangano. Ndinoda kuvamba nokukutendai zvikuru kuru nokuuya kwamaita. Mauya makatakurwa nemhepo yeChimurenga.
Mauya muzere matundundu neshungu, shungu yekuti nhasi, zuva ranhasi, pano pamusimboti weZanu-PF, chokwadi chamauya makataura chibude. Zvivi zvose zvamurikuona mumusangano muzvitaure, handisati ndanzwa kuti Gamatox inorevei Muchatondidzidzisa. Ava (pointing at Cde Didymus Mutasa) ndakatovavhunza kuti zvninorevei. Ndovanonzi ndovakavamba izwi racho rekuti Gamatox. Zvino kana muchiti “pasi neGamatox” muri kuti pasi navo here? Kuti ndivo vapari vemhosva here ava? Haaa, kwete.
Ini ndafunga kuti zvamuri kutaura muno zvehutengesi, kupanduka kwauya muparty. Zvine vanhu vazvo vakakwira mabhiza azvo. Vanova ndivo varikutaura izvozvo. Kana vaMutasa vari ivo, aah. Chandanga ndichiziva, hameno kana muchiziva zvizhinji pamusoro pavo, ndechekuti tichienda kuCongress vanhu vanoita shungu dzokuda kuvavarira kukwira pazvigaro zvepamusoro.
VaMutasa vanonzi vanoda chehu chairman. (shouts of havapinde, havapinde) Vanoda chehuPresident vamwewo avo. Zvino shungu yokuda chigaro chemberi, kana vainayo, ndoyovofira here iyoyo?
Eh ndakataura navo kwemaawa anokwana maviri ndichiti muri kunenerwa huroyi. Vakati “kwete kwete handife ndakadaro”. Kuti ndiyeu muroyi, ndiyeu hapana mumwe apedza hama? Chandakavaraira ndechekuti kana vachiita mashoko nokufambidzana nevanonzi chaivo ivo varikuda kukutura President, ndozvirikuita vanhu kuti vati nemiwo.
Asi vanoti ivo pamakati party yapinda zvipfukuto, ivo vakati tichazvitsvagira gamatox. Ko vanoti “ndakatadza here kutaura? Zvino vava kunditi gamatox, gamatox” Zvino gamatox munhu mumwe chete iyeyu? Vakawanda? Aiwa, ngatichibvai ipapo ndikupirei mashoko andinawo.
Muparty yedu, yeZanu-PF, iparty yeChimurenga. Yakavakwa nevatungamiri vamwe hatisinavo, vari kuHeroes Acre — vazhinji vacho nevashoma vasara. Ini ndini mumwe wavo. Hatina kuvaka party tichiti tiri kuzvi vakira isu. Kwete. Kuongorora kwakavapo kwekuti vanhu vedu vatambudzwa kwemakore nemakore munyika yavo. Ndezvipi zvatingaite kuvasunungura, kurwisa vavengi, kuti nyika yavo, rusununguko rwavo, masimba avo adzokere kwavari.
Vakatigara matumba mabhunu, tivabvise munyika muno. Vatinenge tati togara navo, ndeavo vanenge vabvuma kuti nyika ndeyenyu nesu, tingadewo kugarisana nemi tichitongwa pasi pemurawu, pasi pemasimba evatema.
Ndozvavakaramba izvozvo pakutanga. Ndozvakaita kuti vatungamiri vazvironge, vanotsvaga pfuti, vazviumbe, varwise muvengi. Havana kurwisa muvengi vachiti ini ndinozoda kuti ndive ngana. Takanga tisina tsika iyoyo, yokusarudza zvigaro, kana yokurwira zvigaro. Handina ini kubva kwataikaita kuGhana ndichiuya ndichiona National Democratic Party yaitwa, vamwe vati ah chirega kudzokera, ndiwe wauya nemashoko eruzivo rwekuti vana (former Ghanaian president Kwame) Nkrumah kuGhana vakatora sei nyika. Ngatibatanei. Ndikangonzi chiva iwe munyori publicity secretary.
Handina kuramba, handina kuti vanaMalianga waive deputy president hauna kuita chikoro chandakaita saka haungatitungamira. Zvakanga zvisipo izvozvo. Watasarudza iyeye kuisa panzvimbo. Asarudzwa nevanhu ndiyeye. Kuzvisarudza hakubvumidzwe. Kuzvida iwe muparty, kuti ndini hazvibvumidzwe. Taizvidzikorora naVaMutasa tichiti eh, ndiwo mauyiro amakaita imi muparty.
Saka tauya takaita bumbiro redu rekuti nyika yauya ichazotongwa sei? Ivhu rinosungirwa kuti riri mumaoko evanhu. Vanhu vaine masimba ekusarudza vatungamiri. Isu tinozvipira kuvanhu, hongu patakazviruka tichiti tirikuenda kuhondo, tiri vanhu takatarisa tichisarudzana pagroup ipapo, paruzhinji hwaivavo panguva iyoyo, akanga asiri munhu wese kuti ngana enda apa, iwe enda apa, iwe enda apa.
Asi zvino nyika yauya, vanosungirwa kusarudza vachazotonga kana vachabata zvigaro zvomupaarty, vanhu vedu, nhengo dzedu ndivo vanofanirwa kuita masimba. Saka kana pane vari kuda zvigaro, hazvisi zvekurwira, hazvisi zvekutenga vanhu nemari kuti usapotwe. Vanhu, kuzadzisa zvido zvevanhu ndozvinoita kuti vebato raunenge uchiita iwe vanhu vaone kuti uri mutungamiri wechokwadi.
Zvino kana uri mutungamiri anoda kuti vanhu vandisesekedze mberi kuti ndigozowana chigaro, ndigozowana maitiro emari, ah? hauna kufanira kuva mubato redu. Haukodzeri kuva mubato redu kana uri munhu wemari. Kana wakanga usingazivikanwe nguva yese yehondo, zviriizvo zvawaive nazvo mupfungwa, kunyangwe uri veteran, ukangoratidza izvozvo, tototi hoo ndizvo zvawakaita izvi? Hatikude.
Saka pazuva ranhasi nechiratidzo chenyu, ndinovimba kuti vamwe vachanzwa, vamwe vachanzwa zviri kubva kuvanhu. Vamwe vachanzwa. Ko, madzimaiwo pachavo, handini kwete kana ini ndakatochechukwawo vati tinoda Mai kuti vatitungamire. Ko chakaipa ipapo chii?
Mai, Mai vamwe vadiki kwamuri. Sally Mugabe vandakabva navo kuGhana ndivo vakatanga Women’s League nevamwe madzimai mashomani. Vanhu vakanga vasati vava neruzivo asi pamusana pekuti vanaNkrumah kuGhana ndiwo maitiro avakaita pakuvaka party yavo kuti vanoita party yemadzimai, Women’s League.
Saka Mai Sally vaiziva nemaitiro azvo. Ndokuchigara pasi nevamwe vana Jane Ngwenya nevamwewo vekutangisisa chaivo vekutanga kuti ndiwomaumbirwo azvo. Zvimwechetezve nekuZambia. Takakopa zvaiitwa kuGhana, kuMalawi zvimwechete izvozvo zvemadress anosvika pasi apa pazvitsitsinho handiwo mapfekero akanga achiita madzimai. Kunyangwe kuMalawi vakanga vasingapfeke kudaro. Vaiita zvavo zvekumonera zvichisara kumupimbiri uku asi ndozvatava kuita pese paWomen’s League. Mauniform ese zvakabva nekuGhana.
Ko kana mudzimai waPresident wokutanga taive naye kuMaputo tikauya naye kuno uku akadakara akafa akaiswa kuHeroes Acre, ndirwo rukudzo rwaakapihwa pamusana pebasa raakabata, kana iyewo akabvumwa nemusangano, ko uyu avakurambirwei? Ko constitution yemusangano, bumbiro remusangano hapana parakanyorwa kuti mudzimai waPresident haagone kuva mutungamiri.
Hapana, kana. Zvinoenda nekuti iye anenge achidei. Saka paakanzi huyai mutitungamirire, vakandibvunza zvikanzi “pfungwa yamungandipe ndeipi?” Ndikati “aiwa, iyi inyaya yekuti munozvifungira pachenyu”, zvikanzi “aiwa, ndabvuma”. Zvino vabvuma kudaro, ko charwadza vamwe chii?
Handisi kuzvinzvisisa ini? Charwadza vamwe, even mawar veterans, iye wamurikuti Jabulani, chakamurwadza ipapo chii? Zvino, yah, madzimai chinzwai, madzimai ati zvamabvuma Mai Mugabe, tochifamba province neprovince tichikuratidzai kumadzimai nenhengo dzemusangano. Tichange tichiita marally. Aah, vamwe vakunodzivisa marally iwayo. Marally emusangano. Aah, kutakura ngoma kunoridzira kumusangano. Ndakati kunoita mhere mhere dzemayouths mashoma shoma.
Ndakati kunavaMutasa ndimi murikunenerwa kuti maunza mayouths vakati aiwa. Chinzwai. Kana muchivapomera mhosva movapomera mambozwawo zvavakataura. Vakati aiwa, haasi mayouths ekuno kuManicaland, abva kuHarare. Yah, ndivo ivava. Chinzwai, tazoenda, vazoenda kuMarondera, ndiko kwakabva kwatakurwa nengoma, nengoma kunoridzako. Uko kwagara kuchizivikanwa kuti kune kamurume kanonzi Kaukonde.
Zvisingazive vanhu vedu vamwe vechidiki ndezvekuti wasarudzwa iwe kuti iwe ndiwe mutungamiri weprovince ndiwe chairman, hauna kupihwa hushe hwekutonga. Wanzi unotungamirira vanhu. Kutungamirira vanhu hakureve kuti ndiwe waakuti ndinoda ngana, handidi ngana, ngana haauye kuno.
Uri ani? Unenge uri aniko? Kune machairman ataona vakabva vadhakwa nehukuru hwekuva, hwavapihwa ihwohwu. Zvimwechete naChairman wekuMashonaland West (Temba Mliswa), anofunga kuti iye zvaaitwa chairman, wabva apihwa haa, masimba aKing, ehushe pamusorosoro kupfuura vaMugabe imi. Ngana na ngana vakaipa, ngana nangana wakadai, zvandataura ini ndizvo chete.
Ah, kuno tatara kuti tinoda kuti vanoenda kuCongress vasarudzwe zvakanaka. Saka kuprovince yoga yoga tinoda vatungamiriri vanosarudzwa kuCentral Committee nekuPolitburo vanoenda pasi vachinoshanda neveprovince kuona kuti kuprovince ikoko vanhu vari kusarudzwa zvakanaka here, kuti hapana district inosungirwa kusiiwa. Now, vamwe chairman voti, ah, no simba riri kwauri.
Aiwa, kana isu kuno kumusoro tati tiri kutuma vanhu kuzosarudza pamwe chete nemi vachiona kuti madistricts aripo kuti ndeapi? Ndevapi vanhu vanobvumwa kubva mumadistricts ikoko, vatatu vatatu vatatu vatatu kuti vazoenda kuCongress? Ndedzipi nzira dzirikuitwa kuprovince ikoko dzekugadziridza mabus, transport zvose nemafambiro evenhu? Kuronga zvakanaka kuti vanhu varege kuita dambudziko rakaitika pamayouths congress riya.
Asi munoona chairman veprovince achidai ndini ndinoita izvi. NeWomen’s League zvimwechete izvozvo, tinoda kuti kuve netsika imwechete iyoyo. Now kuma war veterans, Jabulani (turning to Mutasa) hameno ndimi munonzi makamutengera motaka. Akapiwa mota ndokutaura kunoita vanhu navaMutasa. Akagozopihwa dzimwe mota shanu dzichibva kuchibusiness here chiri kuitwa nava (David) Butau kuMashonaland Central. Saka apihwa izvozvo akubva anamata vakamupa. Asi arasa gwara chose. Hameno kohondo yaari kutaura ihondo yamuka papi? Yaari kuda kurwa iye Jabulani. Achida kuita hondo. Saka arikuda kuita hondo nemasoja angu? So tingade kuzviona kuti ari kuironga rinhi hondo yacho.
Hatidi kuti munhu atengeke zvakadaro. You are not a commodity? Mune pfungwa, ndimi mune zvido zvatinosungirwa kuti tinge tichizadzisa. Kana tichiti Zim-Asset yedu, kuipfudzunura nemaprojects nemaprogrammes atinoda kuita tinenge tichitarisa hunhu hwevanhu vedu, magariro avo, kudya, fundo yevana, hutano hwavo, nzira dzavo, mafambiro, zvose ndozvatinoda kuti zvisimudzirwe izvozvo. Ndozvatakafambira kushanyira kuChina izvozvo kuti vatibatsire panguva ino yemasanctions.
Kuti maprogramme edu abudirire, aenderere mberi takatarisana nezvinangwa zvevanhu. Mukudaro kwedu, imiwe tinenge tisingazive zvimwe zvacho zvinoitika pakati pedu. Vamwe vatungamiri vari kuda mari.(shouts of Savanhu from the crowd) vamwe macompany aye anonzi, tine macompany edu akati wande, vanoti ah tanga tichida kuita mabasa kuno asitatadziswa nekuti vari pamusoro penyu, dzimwe nguva ndiminister vari kuti tangai mandipa mari yakati (shouts of 10 percent).
Zvino tiri kuti mamwe macompany anovanziridza tinoda mazita acho kuti adurwe. Iye zvino tine nyaya yamacompany anoti ehe, kuno uku takanzarwo kuti munosungirwa kupota muchitipa mari yakati,mari yakati, mari yakati. Asi tinenge tichida chokwadi chacho, hatide nhema (shouts of Joice!).
Iko zvino tiri kugadzirira congress yeduka, congress yedu icongress yekuti tione mberi kwatiri kuenda, tione zvatinoda kuita. Zvino tadaro, kutarira mberi nezvinangwa zvedu nekusimbaradza Zim-Asset, tozoti takabatikana sei muparty. Party yedu inosungirwa kusimbaradzwa sei? Ndevapi vachasungirwa kupinda, ndevapi vatinoti ava vava vezvivi (shouts of vaMutasa), havasungirwi kuramba vari pamusoro. Ndobasa ratiri kunoita kuCongress. Hatichada vanhu vanoda zvemari tivaise mberi. Imi moramba makasimba makasimbaradza party.
VaNyaruwata mataura kuti chinoshupa kumawar veterans ndechekuti makadimurana nepakati. Iye anenge achiti ndine vandinotungamirirawo, hameno kuti ivavo vaari kutungamirira zvaari kutaura izvozvo anotaura sekunge ane shavi sekunge agarwa naBeelzebub, uya anonzi Beelzebub mubhaibheri ane mweya wasatani. Vanomutsigira here? Ko ngavauyeka vabatane nemi pamwechete.
Gadzirai tinokwanisa kuita musangano, ndiriPatron wenyuzve, mozvigadzirisa ikoko, congress tisati tatanga congress sekugadzirisa kwakaita madzimai nemayouths. Tazoenda kucongress munoenda muine chokwadi chekuti vari kuti miririra vari kutimirira pachokwadi.
Aiwa tinoda kukutendai nekuuya kwamaita. Eh runyararo ruri pakati penyu nokuti nezuro mauro ndakafonerwa nevekumapurisa vachiti ah, vari kuuya tiri kunzwa kuti vamwe varikuuya kuzoda kurwisa. Vaiti kune zvikwata zvinoda kurwisana nevamwe vemavafactions, ndikati aiwa kana vanhu vedu vachiti vari kuuya kumusimboti weparty, havarambidzwe. Havarambidzwe paheadquaters pano.
Chatinongoda chete tinenge tichidawo runyararo, tichidawo zvakare kuti munge matipawo yambiro yekuti muri kuuya. Asi vakazoti Minister (Kembo) Mohadi akazoti aiwa vanhu ngavauye. Asi kumwe ndinonzwa kuti vanaJabulani vakanga vamisa mabhazi kuti hapana anoenda. Saka Jabulani avakutonga muno munyika, toti? Kuiti iye angati ava havaendi vanhu vachida kuuya. Ko ivo kana vachibvuma kunzwarwo, kurambidwza kuzadzisa chido chemusangano chido chavo, aah vanenge vavamarombe kani?
Pamberi neZanu-PF, neChimurenga, neChimurenga.
Zuva ranhasi izuvawo ratiri kuita hurongwa hwekuona kuti tasvika papi nekuronga kwatiri kuita kuti congress yedu tizosvika pairi tisina matambudziko, matambudziko ekuti vanhu vanogara kupi? Matambudziko ekuti vanhu vachafamba sei? Matambudziko ekuti vanhu vachadyei? Zvese izvozvo toda kuona kuti tirikuvamba kuzvigadzira here nekuzvironga zvakanaka kuti ungova mutserendende.
Pamberi neZanu-PF! Pamberi neZanu-PF! Pamberi neZanu-PF! Aiwaka party inemarongero ayo, inga chinzwaizve, inga kana muchato inodimbuka wani. Ungabva wati here munhu wemurume ibva pano pamba pangu enda kumusha kwako zuva ranhasi mudzimai wawagara naye? Unomupawoka nguva yekuti agadziridze zvaari kuita. Handiti munenge maita vana, apa dzimwe nguva anenge amboitawo dura rake maaisa turukweza twake. Zvino ungabva wamuti simuka usina kana mbatya?
Aiwazve handiti nyaya yacho inoiswawoka kuvabereki vemukadzi kuti ah ndozvava kuita mwana wenyu izvi ehe, yotaurwawoka zvakanaka saka. Matauriro atinoita zvakanaka nenzira yakanaka kucongress kwedu, inga yasvika wani congress? Yasvika, yasvika zvose tichataura izvozvo. Saka vamunenge musingade hamuvavhotere, Vamunoda, vamunenge matuma kwatiri ndivo vanopindawozve.
Aiwa pfungwa dzenyu tadzinzwa, nemazwi amuri kutaura iwayo vanenzeve vanozvinzwira. Yah eehe saka VaMutasa tinavo ndivo secretary ka. (shouts of ngavabve, ngavabve) Aah mabva mavaramba? Hamuvabvumire kuti aiwa huyai mudare tikutongei? Hee, dare rakaoma iri. VaMutasa murikutandwa pano apa, asi ndati tine tsika yatinotevera vanhu vatinopa mhosva tinovapa mhosva yotaurwa zvakanaka kucongress, tovati aiwa iwe takutsautsa, tava kusarudza vamwe.
Ehe, aiwa sezvandakuudzai tinebasa. Ndanzwa zvichemo zvenyu ndinofunga vakakutungamirirai vachatinyorera zvakare pasi kuti zvamauya nazvo zvichemo ndezvizvi nezvizvi nezvizvi, kuti vazhinji veduwo vamwe vatungamiriri vatinoshanda navo vave neruzivo rwepfungwa dzenyu, vave neruzivo rwezvamusisade. Vamusisade, ehe. Saka ndinoda kukutendai. Pamberi neZanu-PF! Nekubatana! Nekunzwisisa!
MaComrades tinawo pano, pamberi nemawar veterans ese! Nemayouth ese! NeWomen’s League yose! NeChimurenga! NeChimurenga! NeChimurenga! VaMatemadanda, inga vanokwanisa wani kuritema danda, asika kuti variteme, vanotosungirwa kuva nedemo. Demo rigopinza, risina kugomara, saka ibheura chairo anonzi mabheura aye. Ndoravanaro. Toda kuvatenda ayiwa mabata zvakanaka pano, tinozvitenda izvi vanhu vedu ngavauye vanezvichemo zvakadai vakazvironga. Hazvirambidzwe, mapurisa ndofunga varikuzvionera.
Dai vanga varambidza musangano uyu maito nekusema mapurisa zvainge zvakura mberi. VaNyaruwata, eeh basa munaro iri, kuzviisa pamwechete. Saka mozoronga munaNovember, moronga moita musangano wekutaurirana chokwadi. Nesuwo tinenge tichinzwa haa, kunyangwe muri mawar veterans, munetsika nerukudzo. Jabulani anofunga kuti iye zvaataura, aah, mubati wemheni, because he is just a war veteran, haasi? He is fake? Saka vana Chinotimba makamubvumirei? Taurai.
Pamberi nekubatana, ndochokwadi ichocho chirimuZanu-PF, tinoti isu “Forward Ever, Backwards Never”. Tamira tamira hatidzokere shure, kunyange vakauya nepfuti dzakadii maBritish, tati ichi ndochokwadi chedu, ndochokwadi chedu. Ndozvaita kuti tivakurire, vose vane pfuti dzakakura kupfuura dzedu panyaya yeZimbabwe, panyaya yemasimba edu, panyaya revhu redu, panyaya yerusununguko rwedu kuti tirimuno muZimbabwe. ndisu vakuru. Kwete imi maBritish, kwete imi maAmericans, we are the sovereign rulers of Zimbabwe.
Isu, isu, vanhu veZimbabwe. Tikaramba takabatana tirivatema, munoona tinoti tirivatema. Ndaitoti kumudzimai wangu iwe uri mutsvuku nyika ndeyevatema iyi? Tichinavo vatsuku, vanouya kutisapota hazvina mhosva, saka ndeyevatema nyika iyi. Kareko tainzi ndisu zvimbwasungata. Kana dzimba idzi dzamunoona idzi dzimwe ndisu takazovakawo kwainzi no dogs and natives are allowed muno.
Aaah, tine tsika tinotova mberi kupfuura dzavo ivo havana tsika ivo varasa kana bhaibheri havachariziva kuti rinorevei. Nyaya yekuti murume anoroora murume, mukadzi anoroora mukadzi, zvichibva vanhu vanoti ndisu vangwari panyaya yecivilisation we are more civilised. No you are down, down, down below dogs. Panyaya dzakadaro idzi. Below dogs nekuti imbwa dzinozivazve mutemo yadzo kuti murume ndeuyu mukadzi ndeuyu tinoita vana vedu nemutoowo uyu. Nenguruve ndinadzo, nguruve dzangu dzakawanda dzinozivana haumboifundisa ayiwa kuti mukadzi ndeuyu. Ko imi matadza sei. Haaaa sorry kutoti imbwa dzevanhu, aaah kutotuka imbwazve dzineruzivo.
Zvino tinotovati chii zvikara zveyi? Ayiwa ndochipedza zvino ndinokumbirawo vatungamiriri venyu vandisunungure ndiende kumusangano iyezvi. Tinoita misangano yakakomba nezuro ndakatorara, ndara ra 2am nhasi nokuti basa rinenge rakawanda uchiti ndibve ndapedza ranhasi ramangwana ndigozoriwonawo. Saka asi tinosimba nekubatana asi pabasa renyika hatinete, pabasa renyika hatina nungo, pabasa renyika hatiture mutoro tinoramba tiri mberi, tinoramba tichiti pamberi neZanu-PF, pamberi neZanu-PF, pamberi neZanu-PF, pasi neMDC, pasi nevemafactions.
Mugabe's Full Politiburo Speech
HARARE - PAMBERI nokubatana mu Zanu-PF!, neWomen’s League muZanu-PF! neYouth League mu Zanu-PF! pamberi neChimurenga! Nechimurenga! Nechimurenga! Pasi neMDC! MaComrades ose, Cde (Patrick) Nyaruwata, maWar Veterans vese varipano, vanaamai (Shuvai) Mahofa ...